Ampidino Android Studio 2.3.2.0 ho an'ny Windows
Ampidino Android Studio
Sehatra: Windows Version: 2.3.2.0 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (1893.38 MB)
Ampidino Android Studio, Android Studio dia programa ofisialy sy maimaim-poana anny Google azonao ampiasaina hampivelarana ny rindranasa Android. Android Studio dia programa feno sy malalaka ary natao ho anireo mpandrindra fampiharana Android. Ny programa dia miaraka amina fitaovana fampivoarana Android marobe.
Miaraka aminny Android Studio, izay afaka manampy anao hamaha olana sarotra mora foana, tsy afaka mamorona rindranasa fotsiny ianao fa afaka mamaha olana aminny fampiharana efa misy. Ny Android Studio, izay programa lehibe sy feno dia manamora ny fiasanny mpamorona Android sy ny olana atrehinizy ireo. programa mahomby sy manaitra noforonini Google hanampy.Raha mivoatra na te hampivelatra fampiharana Android ianao, ny Android Studio dia mety ho iray aminireo mpanampy lehibe indrindra aminity sehatra ity.
Azonao atao ny misintona azy maimaim-poana ary manomboka mampiasa azy eo noho eo.
Android Studio Specs
Haben'ny rakitra: 1893.38 MB